Masenze imali: Iindlela ezi-8 zokuJika ukuThengiswa kwezeNtlalontle kwiNtengiso | Martech Zone
Masenze imali: Iindlela ezi-8 zokuJika ukuThuthwa kweMithombo yeendaba yeNtlalo ibe yiNtengiso
NgoLwesihlanu, Agasti 17, 2018 NgoMvulo, Oktobha 18, 2021 U-Anna Bredava
Ukuthengiswa kwemithombo yeendaba zentlalo yeyona nto intsha yeengcali zentengiso kwihlabathi liphela. Ngokuchaseneyo nenkolelo yakudala, ukuthengiswa kwemithombo yeendaba zentlalo kunokuba nengeniso kulo naliphi na ishishini - akukhathaliseki ukuba abaphulaphuli ojolise kubo yiminyaka eyiwaka okanye isizukulwana X, abafundi besikolo okanye abanini bamashishini abakhulu, abalungisi, okanye oonjingalwazi beekholeji. Ukuqwalasela into yokuba kukho malunga Abasebenzisi beendaba zosasazo abayi-3 bhiliyoni kwihlabathi liphela, ungatsho ngokwenene ukuba akukho bantu banqwenela ukuthenga imveliso yakho phakathi kwabo? Umsebenzi wakho kukufumana aba bantu.
Xa kuthelekiswa nentengiso yesiko, intengiso yemidiya yoluntu ineenzuzo ezininzi- eli jelo lonxibelelwano lixabiso eliphantsi kwaye libonwa njengelinyanisekileyo nelinokuthenjwa, elenza ukuba lilungele ukuguqulwa. Awudingi ukuthatha ilizwi lam ngalo - jonga nje ukuba lingakanani iinkampani zichitha imali kwintengiso yemidiya yoluntu. Ngoko ngokwenene usebenzisa njani imidiya yoluntu ukwenza inzuzo?
Hlalutya inkqubo yakho yokuthengisa
Uphando yiGrail eNgcwele yentengiso-awunakuthengisa nantoni na ngaphandle kokuqonda ngokunzulu ukuba umntu othanda ukuthenga imveliso yakho wenza njani kwaye uthatha izigqibo. Kungenxa yoko le nto, okokuqala nokuphambili, kufuneka uhlalutye inkqubo yokuthengisa ngasemva kwefaneli yakho yokuthengisa.
Imibuzo ekufuneka uzibuze yona ukuhlalutya amathuba akho eentengiso zentengiso ngala:
Yeyiphi imigudu kungoku uzisa izikhokelo kwifanele yakho?
Yintoni i inkqubo yokuthengisa?
Yimalini ixesha kuthatha ukuthatha ukuvala isivumelwano?
Iimpendulo zale mibuzo zingakothusa: mhlawumbi uya kufumanisa ukuba ujolise kumaqonga angalunganga ngalo lonke ixesha. Kule meko, unokukufumanisa kuluncedo ukwenza uphando oluncinci olunikezelwe ekukhetheni elona qonga lonxibelelwano loluntu lishishini lakho.
Ungayenza ngokulandela imithombo yeendaba yoluntu okhuphisana nabo kwaye ubone ukuba zeziphi ezona ziqonga zibaluleke kakhulu kubo, kodwa kukho indlela esebenzayo ngakumbi nenhle yokwenza. Yonke into oyifunayo sisixhobo sokumamela eluntwini njenge UAwario. Ngayo unokujonga ukukhankanywa kwalo naliphi na igama eliphambili kwimidiya yoluntu kunye newebhu ngexesha lokwenyani.
Masithi wenza i-SaaS yeziqalo-ubeka nje "ukuqala" njengelinye lamagama akho aphambili kwaye ubone ukuba zeziphi iiplatifomu ezinokukhankanywa okungakumbi kwaye, ke, iingxoxo ezininzi ezisebenzayo kwimveliso yakho. Ngale ndlela uya kuba nakho ukuqonda ukuba baphi abajolise kuwe kwaye ubeke phambili amajelo afanelekileyo.
Gcina ukhumbula ukuba kwimithombo yeendaba kwezentlalo uhlala ufikelela kubathengi abanokubakho kwangoko kwinkqubo yentengiso: ngoku inqanaba lokwazisa ngesahlulo sahlulwe santathu (ukubhengeza, impembelelo kunye nokuzibandakanya). Oko kuthetha ukuba kuyakufuneka ubumbe isicwangciso-nkqubo sakho sentengiso yemidiya yoluntu ngokufanelekileyo.
Ukubeka iliso kunye nokukhuthaza uPhononongo lweMithombo yeendaba
Ubudala bentengiso yesiko buza esiphelweni- imithombo yeendaba zentlalo ibuyise eyona ndlela isebenzayo yokuchaphazela indlela umntu aziphatha ngayo ekuthengeni. Ngaba uyintoni? Lilizwi lomlomo. Ngapha koko, ngokuka Nielsen, 92% yabantu Izindululo zokuthembela kubahlobo kunye nosapho kuzo zonke ezinye iindlela zokuthengisa, kwaye 77% yabathengi kunokwenzeka ukuba bathenge imveliso entsha xa ufunda ngayo kubahlobo okanye kusapho. Kungokwemvelo ukuba ukhethe ukuthemba abantu obaziyo ngaphezulu kophawu.
Imithombo yeendaba yoluntu yindawo efanelekileyo yokuthengisa: onke la maqonga ayilelwe ukuba sabelane ngamava kunye nokufumanisa okumangalisayo kunye nabahlobo bethu. Ke into ekufuneka uyenzile ukwenza imali ngayo kukukhuthaza abantu ukuba babhale malunga namava abo. Unokubanikezela ngenkuthazo encinci, njengesaphulelo esincinci okanye isampulu.
Ungalibali ukuphendula kulo lonke uphononongo, olulungileyo nolubi ngokufanayo. 71% yabathengi abanamava enkonzo yemidiya yoluntu kunye nophawu banokuyincoma kwabanye. Ukuzibandakanya okusebenzayo kwimithombo yeendaba kwezentlalo kwicala lophawu kudala uphawu phakathi kophawu kunye nomthengi kwaye kubenza bazive bevile, nto leyo ebaluleke kakhulu ekugcineni.
Thatha ukuThengisa kweNtlalo
Ayipheleli nje ekuthandeni ukuba abantu babelane ngeengcinga zabo malunga neebrendi kumajelo eendaba ezentlalo, bahlala bejikela kumajelo eendaba ezentlalo ukuze bafumane iingcebiso. Apho sele unazo izikhokelo ezinokubakho - kufuneka nje uzichonge. Ungazifumana ngokubeka iliso kuluntu olufanelekileyo njengamaqela Facebook, subreddits, Twitter chats ect. Unokusebenzisa isixhobo sokumamela sentlalo kuloo nto, kodwa qiniseka ukuba inento efana nayo Imowudi yokukhangela yeBoolean, ekuvumela ukuba wenze ngokwezifiso imibuzo yakho ukuze wenze uphando lwakho luchaneke kwaye lubanzi ngaxeshanye.
Uthathela ingqalelo into yokuba kwiimeko ezininzi uya kuphendula kubantu ongabaziyo abangazange bavezwe uphawu lwakho ngaphambili, thatha ixesha lakho. Sukungena kanye kuyo ngepitch yokuthengisa engenamvakalelo - buza umbuzo, uchaze ukuba banokuzuza njani kwimveliso yakho, sebenzisa ithoni kunye nelizwi elifanelekileyo kwiqonga kunye nesicelo sabo, kwaye wenze olu nxibelelwano lube nentsingiselo kwaye lube yinyani. Ngale ndlela unokuba nefuthe kwisigqibo sabo kunokuthumela umyalezo we-cookie-cutter kuyo yonke isikhokelo oya kuyifumana. Kwaye ke, yenza kube lula ukuba bathenge - banike ikhonkco, elikhokelela ngqo kwimveliso.
Yandisa iNdlela yeendaba yakho yoLuntu kwiNguquko
Ukuthetha ngamakhonkco, abaluleke kakhulu. Singabathengi abonqenayo abasoloko befuna ukuxelelwa ukuba bangayithenga njani kwaye phi imveliso efunwayo. Ukuba umxhasi onokubakho akakwazi ukucofa nje ikhonkco kwiwebhusayithi yakho kwangoko, kunokwenzeka ukuba abayi kuzihlupha ngokuyikhangela.
Into ekufuneka uyenzile kukubeka amakhonkco kuzo zonke iiprofayili zakho kwaye uzenze zibonakale. Ukuba uthumela isithuba sokuthengisa - beka ikhonkco apho, ukuba uthetha nje enye yeemveliso zakho - beka ikhonkco apho. Naxa uphendula ukuhanjiswa, ebesixoxile ngako ngaphambili, unokubeka ikhonkco kwimveliso exoxwayo.
Kuya kufuneka uyenze indlela eguqukayo igudile kangangoko.
Hlaziya iphepha lakho lokufika kwimithombo yeendaba
Xa ukhokela, ufuna ukuqiniseka ukuba banqakraza kanye kude kuguqulo. Kuya kuba lusizi ukwenza isicwangciso esimangalisayo sokuthengisa kwimithombo yeendaba zentlalo kuphela ukuba inkqubo yokuthengisa imiswe kwinqanaba lokugqibela. Kungenxa yoko le nto ufuna iphepha lokufika elifanelekileyo eliya kuthi ngokuqinisekileyo liqinisekise umxhasi wakho ukuba enze isigqibo sokuthenga. Nazi izinto ezimbalwa ekufuneka uzigcine engqondweni uhlaziya iphepha lakho lokufika:
Ilayisha isantya. Abathengi abalali nje, bayaphelelwa ngumonde (uxolo, abathengi!). Balindele ukuba iphepha lakho lingene 3 imizuzwana, ngelixa i-avareji yokulayisha ixesha ili-15. Ke qiniseka ukuba akukho mfuneko yokuba balinde!
Mfutshane kwaye ilula. Akukho sidingo sokudweliswa kwesizathu esinye sokuba kutheni imveliso yakho iyeyona ibalaseleyo kuzo zonke iinkcukacha, kwaye awufuni kuphazamisa umxhasi wakho ngalo lonke ulwazi olongezelelweyo. Yenza umyalezo ophindaphinda ixabiso lakho ulula kwaye ucoceke kwaye ubeke ulwazi olongezelelweyo kwiithebhu ezahlukileyo ekulula ukuzibona-yiyo loo nto.
Kwakhona, ukuthembeka kunye nokudluliselwa Ukugqiba ukuguqulwa ufuna ukuthembela kwabaxhasi. Ukunyaniseka kubaluleke kakhulu kwisigqibo somthengi. Qiniseka ukuba unayo ilogo yakho okanye ubungqina bomxhasi kwinqanaba lemehlo kolunye lwee-margins okanye kwintloko-kwindawo ethile abanokuyibona ngokukhawuleza ngaphandle kokukrola.
Yenza uguquko oluthambileyo
Njengoko sele sixoxile, iinkokeli zeendaba zentlalo zingena kwifenitshala yokuthengisa kwangaphambili kuneendlela zemveli. Ngenxa yeso sizathu, banokungakulungeli ukwenza isigqibo sokuthenga, kodwa oko akuthethi ukuba unokungabahoyi.
Apha ungenza amathuba otshintsho oluthambileyo. Indlela yodidi yokwenza oko kukubonelela ngobhaliso lwe-imeyile. Ewe kunjalo, kuya kufuneka uthethelele oku kubathengi ngokubabonelela ngomxholo wokuzonwabisa kunye nexabiso. Ukwenza umxholo wokuzibandakanya obonisa indlela esebenza ngayo imveliso yakho (izifundo kunye nezifundo), yindlela elungileyo yokuguqula ezi zikhokelela kubathengi abanokubakho.
Indlela entsha evelayo ngoku yile ukuthengisa umthunywa, ke endaweni yokucela abantu ukuba babhalise kwincwadana yakho, unokucela nje imvume yokubathumela umyalezo. Kuqinisekisiwe ukuba abantu kunokwenzeka ngakumbi ukuba bafunde umyalezo kumajelo asekuhlaleni kune-imeyile. Izifundo zibonisa ukuba ii -apps zemiyalezo zinamaxabiso avulekileyo, amaxabiso okufunda kunye nee-CTRs kangange-10X ze-imeyile kunye neSMS. Ngapha koko, ufikelela kubo kanye apho bafika kuqala kwi-brand yakho-kwimidiya yoluntu.
Bandakanya umnxeba olungileyo wokuthatha amanyathelo
Ukuba awuceli nto - awuyi kufumana nto. Nangona ngamanye amaxesha kunokubonakala ngathi umnxeba-wokuthatha amanyathelo unokusityhala, licebo elifanelekileyo xa usenza kakuhle.
I-CTA yakho kufuneka icace kwaye ifaneleke kwisithuba - ngale ndlela iya kubonakala iyinto ephilayo kwaye ifanelekile. Isenokuba sisimemo sokushiya uluvo kwaye wabelane ngeengcinga zabo, ufunde ngakumbi ngesihloko, okanye inkuthazo yokuthenga imveliso yakho. Ukongeza ii-CTA kwiphepha lakho le-Facebook kunokunyusa izinga lokucofa nge-285%. Ungalibali ukuqinisekisa ukuba ukuba ubandakanya nayiphi na ikhonkco, iphepha lakho lokufika lenzelwe ukuguqulwa kwangoko.
Nikezela ngeeNtlalo eziKhethekileyo
Emva kwayo yonke loo nto, eyona ndlela ilungileyo yokufumana abathengi abatsha kukubonelela ngento eyodwa ngembuyekezo - abantu bathanda ukuziva ngathi bayinxalenye yeqela elikhethiweyo. Eyona ndlela icace gca yokwenza oku kukubonelela ngezaphulelo kubalandeli bakho - awunokwazi ukuyenza rhoqo, kodwa njengesivumelwano sexesha elinye ukutsala umkhombandlela omtsha, isebenza ngomlingo.
Eyona ndlela yokuyila (kwaye ingabizi kakhulu) iya kuba kukubamba ukhuphiswano phakathi kwabalandeli bakho. Njengokuba, IindevuBrand yakwazi ukukhulisa ubukho bayo boluntu nge-300% kwaye yaphinda kabini uluhlu lwayo lwe-imeyile ngaphantsi kweveki enye kunye nokhuphiswano lwe-intanethi olucingwe kakuhle. Unokucela abalandeli bakho ukuba babelane kwaye baphinde bathumele iposi yakho okanye benze umxholo wabo ngemveliso okanye inkonzo yakho kuyo. Ubulala iintaka ezimbini ngelitye elinye - ukufumana ukuvezwa ngakumbi kunye nabalandeli kunye nokuqokelela umxholo owenziwe ngumsebenzisi onokuwusebenzisa kwiintengiso zakho zemidiya yoluntu kunye namaphulo entengiso emveli kwixesha elizayo.
tags: IindevuUkukhangela kwe-booleanImowudi yokukhangela ye-booleanindlela yokuguqulaAmaqela e-Facebookikhonkco umncedisiukuthengisa umthunywaimaliizimvo zentlaloImidiya yokuncokolaiphepha lokufika kweendaba zosasazoindlela yemidiya yoluntu ekuguqukeniingeniso yemidiya yoluntuintengiso yemidiya yoluntuukuthengisa kwezentlalouguquko oluthambileyosubreditsIingxoxo ze-twitter
U-Anna Bredava yingcali yeNtengiso yezeNtlalontle e UAwario. Ubhala malunga nentengiso yedijithali, imeko zosasazo lwentlalo, ukuthengisa amashishini amancinci kunye nezixhobo ezinceda nabani na onomdla kwintengiso.
Sitelock: Khusela iwebhusayithi yakho yeWordPress kunye nabaTyeleli
IHypernet: Cofa kwiMandla eLifutshane yeComputer okanye uthengise eyakho